Rikoooo.com - Missing Guages in Boeing 727-200 with 154 Liveries FSX & P3D in P3Dv5
Ntuziaka na-efu na Boeing 727-200 na Live154 FSX & P3D in P3Dv5
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by S1vannah » 02 Ọgọst 2020, 02:23
Ndewo, unu niile! Enweghị m ike iyi ka enwere nnukwu ego ọ bụla egosipụtara na Boeing 727-200 na Live154 FSX & P3D na v5 n’agbanyeghi na o kwuru na dakọtara. Onye ọ bụla mara ihe dị njọ na-abụghị njehie onye ọrụ? Nwere onye ọ bụla nwere okwu a? Ma ọ bụ nke a na - emegide DirectX12? Biko nye gị ndụmọdụ na igwe nke igwe na-acha anụnụ anụnụ ... thx.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by S1vannah » 02 Ọgọst 2020, 22:38
Gbanyụọ nkịta ... ọ bụ njehie onye ọrụ. Na-arụ ọrụ dị ukwuu na P3Dv5!